फेरिँदै जीवनशैली र खानपान, बढाउँदै मुटुरोग
चैत १३, २०७४ मगलवार ११:४९:००
प्राडा या वेई सू चीनको तोङ्जी विश्वविद्यालय सांघाई नम्बर १० पिपुल्स् हस्पिटल, मुटुरोग विभागका निर्देशक हुन्। उनी चिनियाँ पूर्वराष्ट्रपति जियाङ जेमिनका निजी चिकित्सक पनि हुन्। डा सू गत महिना ५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै नेपाल आएका थिए। मुटुरोगका विषयमा डा सूले व्यक्...
चैत ९, २०७४ शुक्रवार १२:०९:००
मनोरोग भनेको मनको रोग हो । जब हामीमाथि तनाव हावी भई त्यसले हाम्रो दैनिकीलाई असर पार्छ भने त्यो मनोरोग हो। सामान्य तनाव सबैलाई हुन्छ । तनाव नहुने मानिस हँुदैन । तर, त्यही तनाव बढी हुनु भनेको रोग हो । कहिले विभिन्न कारणले मनोरोग हुनेगर्छ भने कहिलेकाहीँ बिनाकार...
चैत ६, २०७४ मगलवार १३:४९:००
सडक दुर्घटना र अन्य दुर्घटनामा परी ‘हेड इन्जुरी’ भएर मृत्यु हुनेहरु धेरै हुन्छन्। दुर्घटना वा लडेर टाउकोमा चोट लागेपछि दिमागमा समस्या हुने प्रक्रियालाई हेड इन्जुरी भनिन्छ। विकसित देशमा भन्दा एसियाली देशमा टाउकोमा चोट लागेर मृत्यु हुने सम्भावना ज्या...
चैत २, २०७४ शुक्रवार १२:४९:००
महिला हुन् या पुरुष, आफ्नो अनुहार कुरुप देखियोस् भनेर कसैले चाहँदैन । अनुहारमा केही दाग धब्बा नदेखियोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ । डन्डीफोर आयो भने कतै खत बस्ला कि भनेर झन् चिन्ता हुन्छ । केही मानिसको अनुहार डन्डीफोर र यसको खतले विरुप पार्छ । तर, अब डन्डीफोरको खतै बसे...
चैत १, २०७४ बिहिवार १२:४९:००
पेट डुम्म हुने, बान्ता हुने, कहिलेकाहीँ पेटमा मन्द खालको दुखाइ हुने, कब्जियत हुने, पाचनमा समस्या हुने जस्ता समस्या प्रायःजसो मानिसमा देखिन्छ । अधिकांशले यसलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्छन् । तर ‘डाईभरटीक्युलोसीस’ रोगका कारण यस्तो समस्या देखिएको हुन सक्छ। ...
फागुन २८, २०७४ सोमवार ११:५९:००
साधारणतया हामीले खाएको खाना शरीरभित्र विभिन्न प्रक्रियाबाट चिनी अर्थात् ग्लुकोजमा परिणत हुन्छ । प्याङ्क्रियाजबाट निस्कने इन्सुलिनले ग्लुकोजलाई कोषहरुमा पुर्‍याउँछ र शक्तिमा परिणत भई शरीरका विभिन्न कार्य सञ्चालनमा मद्दत पुर्‍याउँछ । इन्सुलिन आवश्यक मात्रामा उत्पादन नहुँ...
फागुन २६, २०७४ शनिवार ११:४४:००
धेरैजसो बालबालिकाहरु कुनै पनि कुरामा एकाग्र हुन सक्दैनन् । चकचक गरिरहन्छन् । यसलाई हामी सामान्य रुपमा लिँदैं ‘बच्चाको बानी’ भन्छौं र त्यति वास्ता गर्दैनौं । तर यो एउटा स्वास्थ्य समस्या पनि हो । यसलाई एटेन्सन डिफिसिट हाइपरएक्टिभिटी डिसअर्डर’(एडीएचडी) भन...
फागुन २५, २०७४ शुक्रवार ११:४९:००
अस्पतालको अर्थोपेडिक्स विभागमा धेरै मानिसहरु ढाड तथा र घुँडा दुख्ने समस्या लिएर आउने गर्छन् । करिब ७० प्रतिशत बिरामी यस्ता हुन्छन् । यस्तो समस्या सबैभन्दा बढी उमेरका कारण हुने गर्छ । जति उमेर बढ्दै गयो भने हड्डी उति खिइँदै जान्छ । ढाडको हड्डी खिइएर नशा च्यापिन्...
फागुन २४, २०७४ शुक्रवार ०३:३३:५५
मिर्गौला रोग भन्ने बित्तिकै आमरुपमा युवा तथा वृद्धवृद्धालाई मात्र लाग्ने रोग भनेर बुझ्ने गरिन्छ। तर, कलिला बालबालिकालाई पनि मिर्गौलाका धेरै रोगले सताएको हुन्छ। कलिलै उमेरमा मिर्गौला फेल भएर कति बालबालिकाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। सामान्य समस्यालाई समयमा...
फागुन २४, २०७४ बिहिवार २३:३२:२९
सामान्यतया बालबालिका तीन–चार वर्षको हुँदा ओछ्यानमा पिसाब फेर्ने समस्या रोकिने गर्छ । तर कुनै बच्चा ८–१० वर्षसम्म पनि ओछ्यानमा पिसाब गर्छ भने त्यो समस्या हो । यसलाई ‘एनोरोसिस’ भनिन्छ। आम मानिसमा उमेर बढ्दै गएपछि यो समस्या ठिक हुन्छ भन्ने सोच छ ...
मधुमेहले यसरी बिगार्छ मिर्गौला, कहिले हुन्छ ? निदान कसरी
फागुन २४, २०७४ बिहिवार २०:१७:१५
विश्वभर मधुमेहबाट पीडित व्यक्तिहरूको संख्या लगातार बढीरहेको छ । मधुमेहका रोगीहरूको बढ्दो संख्याले मिर्गौैलाले काम गर्न छोड्ने समस्या पनि बढीरहेको छ । मधुमेहले निम्त्याउने सबैभन्दा घातक जटिलता मध्ये यो एउटा हो। मधुमेह सम्बन्धी मिर्गाैला रोग के हो ? रगतमा चिनीको मा...
मिर्गौला पत्थरीका कारण र ९ लक्षण
फागुन २४, २०७४ बिहिवार २०:०१:४४
मिर्गौलाको मुख्य काम रगतलाई फिल्टर गरी सफा गर्ने र विकार वस्तुलाई पिसाबबाट बाहिर फ्याँक्ने हो । यो क्रममा यदि फिल्टर भएको वस्तुको मात्रा बढ्न गए वा फिल्टर भएर गैसकेपछि पिसाबको वहाबमा कुनै किसिमको अवरोध आएमा वा शरीरभित्रको मेटावोलिजममा समस्या भएमा पत्थरी हुन सक्छ । क...
माटोको प्रयोग गरी उपचार गरिने पद्दति के हो ? किसिम र फाइदा
फागुन २३, २०७४ बिहिवार ०३:४५:२०
संसारका हरेक सजीव तथा निर्जीव वस्तुको निर्माण पन्चतत्वबाट बनेको हुन्छ । पृथ्वी (माटो), आप (पानी), तेज (अग्नि), वायु र आकाश यी पन्चतत्वको समिश्रणबाट नै संसारको निर्माण हुन्छ । मानव शरीर पनि यिनै पन्चतत्वबाट बनेको हुन्छ । यी तत्वको सन्तुलन बिग्रियो भने रोग लाग्छ। प्...
के हो माटोको प्रयोग गरी उपचार गरिने पद्दति ? किसिम र फाइदा
फागुन २३, २०७४ बिहिवार ०३:२७:१५
फागुन २३, २०७४ बुधवार १८:२९:००
प्रोष्टेटको सुरुवात भ्रुण अवस्थाको १० देखि १२ हप्तामा प्रोष्टेट ग्रन्थि बनिसक्छ । यो अङ्गको विभिन्न भागहरु हुन्छन् । त्यसमध्ये मूत्र नलीको सुरुतिर रहेको प्रोष्टेटको भाग जस्ले ग्रन्थिको ५ प्रतिशत मात्र ठाउँ लिन्छ, त्यो नै प्रोष्टेट हाइपरप्लेजियाको केन्द्रबिन्दु हो । प्रा...
माटो चिकित्सा र यसका फाइदा
फागुन २३, २०७४ बुधवार ११:५९:००
के हो हर्ट फेल्युअर ? कसरी बच्ने यसबाट ?
फागुन २२, २०७४ मगलवार ११:५४:००
मुटु शरीरको एक महत्वपूर्ण अंग हो। शरीरका विभिन्न भागबाट अशुद्ध भई फर्केको रगतलाई संकलन गरेर शुद्धीकरणका लागि फोक्सोमा प्रवाह गर्नु र फोक्सोबाट शुद्धीकरणपछि फर्केको रगतलाई शरीरका विभिन्न भागमा पम्प गरेर पुनः प्रवाह गर्नु मुटुको प्रमुख काम हो। मुटुमा लाग्ने विभिन्न रोगम...
किन हुन्छ बोली धोद्रो ? कहाँ बन्छ आवाज ? स्वर बचाउन के गर्ने ?
फागुन २२, २०७४ मगलवार ०९:४९:००
जिवीत प्राणीसंग आवाज हुन्छ । त्यही आवाजबाट उसले एक अर्काबीच सन्चार प्रक्रिया गर्छ, अन्तक्र्रिया गर्छ । आवाजमार्फत् नै मानिसले दुःख–सुख साट्छ, भावना व्यक्त गर्छ । यसैले हामीलाई समाजमा घुलमिल गर्न सहयोग गर्छ । आवाजविनाको परिकल्पना हामी गर्न पनि सक्दैनौं। मानिसको आवाज ...
फागुन २१, २०७४ सोमवार १९:२१:००
फागुन १८, २०७४ शुक्रवार २०:००:००